गाउँदा गाउँदै कपडा फुस्केपछि के भयो यिनलाई ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
गाउँदा गाउँदै कपडा फुस्केपछि के भयो यिनलाई ?
ठुलोपर्दा डटकम। ३२ वर्षीया अमेरिकी पप गायिका ब्रिट्नी स्पेयर्स आफ्नो प्रस्तुतीमा यति मस्त भइन् कि उनले आफूले लगाएको कपडाले धोका दिएको कुरा पत्तै पाइनन् । शनिबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुती दिँदै गर्दा ब्रिट्नीलाई कपडाले धोका दिएको हो ।
जब उनी मस्त भएर प्रस्तुती पस्कँदै थिइन् तब उनको कपडाले पछाडिपट्टिबाट धोका थियो । ब्रिट्नीको प्रस्तुती सबै दर्शकले आआफ्नो क्यामेरामा कैद गरिरहेका थिए । यो घटनाको तस्वीर पनि इन्स्टाग्राफमा पोस्ट गरिएको छ।
त्यसो त ब्रिट्नीले प्लेनेट हलिउड रिसोर्ट एण्ड क्यासिनोमा पुरुषहरुका साथ प्रस्तुती दिने क्रममा निकै कम कपडा लगाएकी थिइन् । ब्रिट्नीले लस भेगासको क्यासिनोमा दुई वर्षसम्म कार्यक्रम गर्ने सम्झौता गरिसकेकी छन् । लस भेगासमा ब्रिट्नीको कार्यक्रमको उद्घाटनमा कैटी पेरी, माइली साइरस र सेलेना गोमेजले पनि प्रस्तुती दिएका थिए। एजेन्सी